Xulka Qaranka Soomaaliya oo aad loo amaanay guulahii ay kasoo hooyeen Koobkii Cecafa Cup ee Kampala +Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Xulka Qaranka Soomaaliya oo aad loo amaanay guulahii ay kasoo hooyeen Koobkii Cecafa Cup ee Kampala +Sawirro
By Cumar / December 17, 2019 December 17, 2019
Xulka Qarankeena Soomaaliya oo ka qayb galayay Koobka bariga iyo bartama Afrika oo Sanadkan ka dhacayay Dalka Uganda caasimadiisa Kampala ayaa lagu amaanay ciyaar wanaagii ay muujiyeen intii uu Koobkan socday.
Xulka Qaranka ayaa laba jeer barbar dhac galay halka marna badiyay marna laga badiyay ayaa muujiyay dadaal dheeri ah oo amaan usoo hoyday shacabka Soomaaliyeed meel walba uu kala joogo.
Dadka aadka ugu dhuun daloola arrimaha ciyaaraha ayaa sheegay in Sanadkan Soomaaliya ay la timid wax aan horay looga baran maadaama ay ka badisay koox marna aan lays lahayn way ka badan doontaa oo ah dalka Bururndi.
Cumar oo ah Gudoomiyaha Ururka Ciyaaraha ee Uganda ka dhisan ayaa sheegay in Labadii jeer ay barbar dhaca gashay Soomaaliya ay sabab u ahayd cimilada oo saamayn ku yeeshay.
"Markii Soomaaliya iyo Walaalaha Jabuuti Ciyaarayeen waxaa Garoonka ka da'ayay Roob saa'id ah oo qasbay in ciyaarta sidii loogu tala galay u dhacdo, sidaa oo ay tahay ay Soomaaliya dhanka ciyaar wanaagga iyo baaska ka sarreysay Kooxdii la dheelaysay ee Jabuuti" ayuu yiri Cumar.
Liibaan Shiine, oo ka mid ah Dhallinyarada aadka ula socday ciyaartaha Koobka bariga iyo Bartama Afrika ayaa sheegay in la dhihi karo Soomaaliya Sanadkan waxa ay soo hooysay guul lagu faani karo maadaama ay Koox adag oo Gurigeeda lagu dheelayo ay iska baacisay iyagoo guul dirqi ah halkaas ka qaatay.
"Uganda xulkeeda waa xul aad u adag oo miisaaniyad leh, ahna kooxaha ugu adag ee Koobkan Cecafa Cup dheelaya waliba jooga dhulkooda hooyo ayee 0-2 guusha ku raacday kooxda Uganda, iyadoo xiliyadii hore Soomaaliya marka ugu yaraato looga badin jiray 0-4 iyo wax ka badan" ayuu yiri' Liibaan Shiine oo SONNA u waramayay.
Soomaaliya oo Laba mar bar bar dhac gashay halka marna badisay marna laga badiyay ayaa ku hartay oo kaliya dhibco ee aan ku harin guul-darro sida uu qabo Cumar oo ah Gudoomiyaha Ururka ciyaatoyda ee Uganda ka dhisan,
" Waxaa jira lacago lagu xiray wadamada in ay bixiyaan si koobkan uga qayb galaan, waxaana dhacday in wadamo ay ka mid yihiin Etoobiya, Eretria, Ruwanda, iyo Koofurta Sudan ay ka maqnaayeen koobka, hadiisa wadamadaa ciyaari lahaayeen waxaa hubaal ahaan lahaa in Soomaaliya soo bixi lahayd" ayuu yiri Cumar.
Cumar iyo Liibaan Shiine ayaa Sonna u sheegay in hadii Xulkeena Soomaaliya heli lahaa daryeelka ay heestaan wadama kale xulkooda laga yaabi lahaa guulaha ay soo hooynayaan waayo bey yiraahdeen xulkeena Qaranka waxa ay ka kala yimaadeen dalal kala duwan oo in ay kulmaan waxaa ugu horaysay markii ciyaarta ka dhineed oo kaliya maalmo si ay tabaabar kooban iskula qaataan.
Dowladda Soomaaliya ayay ugu baaqeen in ay xooga saarto daryeelka iyo maal-gelinta xulka Qarankeenna Soomaaliya oo Waddama ugu yar ee qarash ku bixiya ay Sanadkii siiyaan xulkooda Shan milyan oo Dollar, halka Soomaaliya marka ay ciyaar jirto oo keliya la tabo.
Ugu dambeyntii guulaha xulkeenna qaranka Soomaaliya ayaa aad looga dareemay Caalamka dacalladiisa, iyadoo laga rajo qabo in xulkeenna Sanadaha soo socda uu noqdo xulka ugu fiican Dalalka Afrika.